Emepụta nke Ọkara Nkwụsịtụ Ụkwụ na-agbaze ọla kọpa, Ogwe uhie
Home / Ọkụ na-ekpo ọkụ / Ogbugba oku nke oku / Ọkara Frequency itinye n'ọkwa Na-agbaze Ọla kọpa, Ọla Brass
Ọgba aghara na-efu oge na-agbaze ọla kọpa, ikpu ígwè
Categories: Ogbugba oku nke oku, Igbt tilting induction agbaze oku, Ọkụ na-ekpo ọkụ, Ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ Tags: ọkụ ọkụ ọkụ, ọkụ ọkụ na-eme ka ọtụtụ ugboro, mmeri igba mmeghari nke ugboro ugboro, mmeri ugboro ugboro, agbaze ọkụ ọkụ, agbaze ọkụ ọla kọpa, ọkụ na-agbaze
Ogologo Ogo Ogologo Ogologo Ogologo Ogologo Ogologo Ugbo Ogwu Na-agbaze Ogwu Maka Nchacha Copper, Brass, Steel, Silver, Gold and Aluminum
A na-ejikarị ọkụ ọkụ agbazi ígwè, igwe anaghị edozi, ọla kọpa, ọla kọpa, ọlaọcha, ọla edo, na ihe ndị e ji emepụta aluminum, wdg.
Ebube nke MF Induction agbaze igwe:
Ntọala igwe na-agụnye onye na-arụ ọrụ nke ugboro ugboro, onye na-akwụ ụgwọ ma na-agbanye ọkụ, ọkụ eletrik na infrared na onye na-echekwa okpomọkụ nwere ike ịgụnye ma ọ bụrụ na enyere ya iwu. A na-edezi ụdị ọkụ ọkụ atọ dịka ụzọ si agbapụ, Ha na-enwu ọkụ, ọkụ na-enwu ọkụ na ọkụ ọkụ. Dị ka usoro nke tilting, a na-ekeba ọkụ ọkụ na atọ dị iche iche: ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ, ọkụ ọkụ ọkụ na ọkụ ọkụ ọkụ.
Isi atụmatụ nke igwe Igwe nkwụkụrụ Induction:
E nwere ike iji igwe mpempe igwe na-agbaze nchara, ígwè, ọla, aluminom, ọlaọcha, ọlaọcha na ihe ndị ọzọ.
n'ihi mmetụta na-akpali akpali nke sitere na ike magnetike, mmiri mmiri agbaze nwere ike ịmalite n'oge mgbaze iji mee ka mmiri na-efegharị na mmiri na-ekpo ọkụ iji mepụta akụkụ dị elu.
Ọtụtụ ugboro dịgasị iche site na 1KHZ gaa na 20KHZ, a na-arụ ọrụ ugboro ugboro site na-agbanwe agbanwe ma ọ bụ na-akwụ ụgwọ mmezi dịka ihe na-agbaze, ihe dị ukwuu, mkpali na-akpali akpali, mkpọtụ arụ ọrụ, arụmọrụ melite na ihe ndị ọzọ.
Ọrụ ike bụ 20% dị elu karịa ọrụ igwefiti ugboro ugboro SCR;
Obere na ìhè, ọtụtụ ụdị nwere ike ịme ka ọ gbazee ụdị nke ọla. Ọ bụghị naanị na ọ dị mma maka ụlọ ọrụ mmepụta ihe ahụ, ma ọ dịkwa mma maka ụlọ ọrụ kọleji na ụlọ ọrụ nyocha.
Ụdị nlereanya na agbaze ikike:
Tebụl n'okpuru na-edepụta ụdị isi na ọkachamara kachasị ike ịkwado. Banyere 50 ruo oge 60 dị mkpa iji kwụchaa usoro ịgbaze ọkụ na ọnọdụ dị jụụ nke ọkụ ahụ, na ọnọdụ ọkụ nke ọkụ ahụ, naanị 20 ka 30 nkeji dị mkpa.
Ike itinye ọsọ max 15KW 25KW 35KW 45KW 70KW 90KW 110KW 160KW
ọsọ ọsọ voltaji 70-550V 70-550V 70-550V 70-550V 70-550V 70-550V 70-550V 70-550V
Enwe ike ikike ịbanye 3 * 380 380V ± 20% 50 ma ọ bụ 60HZ
Oscillate ugboro 1KHZ-20KHZ, dị ka ngwa ahụ, ihe gbasara 4KHZ, 8KHZ, 11KHZ, 15KHZ, 20KHZ
Ụdị ọrụ 100% 24hours na-arụ ọrụ
Arọ 50KG 50KG 65KG 70KG 80KG 94KG 114KG 145KG
Utu (cm) 27 (W) x47 (H) x56 (L) cm 35x65x65cm 40x88x76cm
Akụkụ kachasị nke usoro ọkụ ọkụ na-agbaze:
1. Ngwunye Ngwá Agha Ngwá Ngwáọrụ MF.
2. Ọkụ ọkụ.
3. Onye na-akwụ ụgwọ ego
Ụlọ Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Ngwá Agha
Igwe ọkụ na-ekpo ọkụ na-emepụta ihe ọkụkụ, 300kg, 500kg
400kg Mgbaze ọkụ nke Aluminom